Fampiasana ny “Riz hybride” : Hampitombo avo telo heny ny voka-bary -
AccueilRaharaham-pirenenaFampiasana ny “Riz hybride” : Hampitombo avo telo heny ny voka-bary
Efa manomboka miroso tsikelikely amin’ny fampitomboana ny voka-bary i Madagasikara. Araka izany, nosantarin’ny Fitondram-panjakana teny Iavoloha, omaly ny fampahafantarana izany.
Tamin’izany indrindra no nitondran’ny minisi-panjakana misahana ny Fambolena sy Fiompiana, Rivo Rakotovao, niaraka tamin’ny Masoivohon’i Chine, ny mahakasika ny tokony hampiasantsika eto Madagasikara ny vary safiotra na antsoina amin’ny teny vahiny hoe “riz hybride”. Nanambara, araka izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, fa tokony hirosoana ny fampiasana ny masomboly safiotra mba hampitombo ny voka-bary eto amintsika.
Voalaza mantsy fa mbola sarotra ny manova ny tantsaha malagasy amin’ny fahazarany sy ny fahaiza-manaony amin’ny fambolem-bary nentim-paharazana. Tsy maintsy hirosoana anefa izany raha tiana ihany koa ny handresy ny fahantrana raha ny nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany.
Raha ny fanazavana, nahatratra 6 taonina isaka ny hekitara ny vary novolena tamin’ny masomboly safiotra ka nanaterana ny santa-bary ho an’ny Filohan’ny Repoblika, omaly.
Hatreto mantsy, mbola manodidina ny 2 hatramin’ny 3 taonina ihany isaka ny hekitara amin’ny ankapobeny ny voka-bary miakatra eto amintsika. Noho izay indrindra, hitombo telo avo heny izany amin’ny fampiasana ilay masomboly safiotra amin’ny “riz hybride”.
Nanome baiko ny minisitera tompon’andraikitra misahana izany kosa ny Filoham-pirenena amin’ny fanatanterahana izany ka hatomboka amin’ny kaominina filamatra izany. Voalaza mantsy fa ny 2020 no fe-potoana hizakan-tenan’i Madagasikara ara-tsakafo.
Marihina fa ilay manam-pahaizana sinoa, Yuan Longping no nanao ny fikarohana nahazoana ilay “riz hybride” ary mbola mitohy hatrany ny fikarohany. Voalaza fa ahatratra 12 taonina isaka ny hekitara ny voka-bary ho azontsika amin’ny fampiasana io masomboly io.